Antsirabe Nahazo tohana ny mpanakanto sy ny mpanao gazety
Tonga tao Antsirabe nanatitra fitaovana hiadiana amin’ny fihanaky ny Covid 19 ny Minisitry ny Atitany sy Fitsinjaram-pahefana, Razafimahefa Tianarivelo, sy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana, ny sabotsy teo.
Manjakandriana Vita ny 90% n'ny asa vaventin'ilay tobim-pamokaran-drano
Mandroso dia mandroso ny asa fanorenana tobim-pamokaran-drano vaovao ao Manjakandriana. Ny 90% n'ny asa vaventy no efa vita ankehitriny. Tetikasa izay iarahan'ny JIRAMA sy ny WaterAid manatanteraka.
JIRAMA Ambovombe Nidoboka am-ponja ireo 5 lahy nangalatra gazoala
Tra-tehaka nandritra ny fisafoan'ny zandary ny halatra gazoala tao amin’ny JIRAMA Ambovombe ny 03 Aogositra lasa teo tokony ho tamin’ny 03 ora maraina.
Mpanjono handeha hanadio lakana ny talata alina no nahita ka niantso Fokonolona ary nampakatra an-tanety ilay faty. Teratany vahiny ilay maty, misy tombokavatsa sandriny ilany saingy tsy mbola fantatra ny mombamomba azy sy ny fomba nahafatesany. Taorian’ny fizahana ny razana sy fanamarinana nataon’ny tomponandraikitra avy eo anivon’ny Fokontany, ny zandary ary ny BMH dia nalevina tao Mangatokana ilay faty ka ny mpamonjy voinan'ny Kaominina ambonivohitr'i Mahajanga no nikarakara izany.